အပွိုငျအဆိုငျတှမြေားလှနျးတဲ့ခတျေမှာ စိတျစှမျးအငျမွငျ့စဖေို့ အလအေ့ကငျြ့ကောငျး ( ၆ ) ခကျြ
နညျးပညာခတျေရောကျလာတာနဲ့အမြှ အခှငျ့အရေးတှေ အခှငျ့အလမျးတှေ မြားလာသလောကျ အပွိုငျအဆိုငျတှလေညျး အငျမတနျပေါမြားလာပါတယျ ။
သငျ့အနနေဲ့ ဒီ ခတျေရစေီးကွောငျးနဲ့ အပွိုငျ မလိုကျနိုငျဘူးဆိုရငျ သခြောပေါကျ သငျနောကျကကြနျြခဲ့မှာပါ ။ ခတျရစေီးကွောငျးနဲ့ အပွိုငျ လိုကျနိုငျရငျတော့ မတူညီတဲ့ ပွိုငျဘကျမြိုးစုံနဲ့ တှကွေုံ့ရမှာပါ ။
ဒီတော့ နောကျကကြနျြခံမလား? ကွုံလာတဲ့အရာတှကေို ရငျဆိုငျကြျောဖွတျမလား? ဆိုတာ သငျ့ဆုံးဖွတျခကျြပါ။ သငျ့အနနေဲ့ ဒီ အပွိုငျအဆိုငျတှကွေားထဲမှာ ခေါငျးမော့ရငျကော့ပွီး နဖေို့ အတှကျ စိတျစှမျးအငျမွငျ့မားနဖေို့ လိုပါတယျ ။
ဒါကွောငျ့ စိတျစှမျးအငျမွငျ့မားစဖေို့ အလအေ့ကငျြ့ကောငျး ( ၆ ) ခကျြကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ ။
( ၁ ) Stress တှကေို ဘယျလို ကိုငျတှယျမလဲ သငျယူပါ ။
ပထမဆုံး ကတော့ သငျ့ရဲ့ Stress Level ကို ကိုငျတှယျနိုငျရမယျ ။ Stress တှေ မြားလာလေ ခန်ဓာကိုယျ ရဲ့ လုပျဆောငျခငျြတှကေ မွနျလာလေ ဖွဈတာကွောငျ့ စှမျးအငျတှ အလဟဿကုနျခမျးရပါတယျ ။ အဲတာကွောငျ့ သုတသေီ တှကေ Stress တှေ ပိလာတဲ့အခါ သကျပွငျးမခမြိအောငျ သတိထားနပေါတဲ့။ ဒါက စိတျစှမျးအငျမွှငျ့တငျဖို့ရနျ အရေးကွီးတဲ့ ပထမဆုံး အခကျြတဈခကျြ ဖွဈပါတယျ ။ မိမိရဲ့ အတှေးထဲကို ဘယျဖိအား မှ ဝငျမလာနိုငျစဖေို့ သကျပွငျးမခရြတာပါ ။
( ၂ ) မိမိကိုယျမိမိ ထိနျးခြုပျနိုငျဖို့ ကွိုးစားပါ ။
မိမိကိုယျမိမိ ထိနျးခြုပျနိုငျဖို့ ဆိုရငျ အရငျဆုံး မိမိကိုယျကို ယုံကွညျမှုရှိအောငျကွိုးစားဖို့ အရေးကွီးပါတယျ ။ သငျ့ကိုယျသငျ ယုံကွညျမှုရှိနဖေို့ အတှကျကတော့ ကိုယျတာဝနျယူထားတဲ့ တာဝနျဝတ်တရားအကုနျပွီးမွောကျနရေပါမယျ ။ အဲ့တာကွောငျ့ အလုပျလုပျတဲ့အခါ သငျ့စှမျးရညျတှကေို မကနျ့သတျထားသငျ့ပါဘူး ။
ကိုယျမလုပျရဲတဲ့၊ ကိုယျမကြှမျးကငျြတဲ့ အလုပျတဈခု လုပျရတော့မဲ့ အခါ “ ငါမလုပျနိုငျဘူး “ လို့ ကိုယျ့ကိုကိုယျ သတျမှတျလိုကျတာထကျ “ ငါမလုပျဘူး “ လို့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ငွငျးနိုငျရပါမယျလို့ ပညာရှငျအခြို့ က ဆိုပါတယျ ။ ကိုယျမလုပျရဲတဲ့အရာဆိုတညျးက အဲ့မှာ သငျ့စိတျ တဈခေါကျ သိမျငယျနရေပါပွီ ။ “ ငါမလုပျနိုငျဘူး “ ဆိုတဲ့အတှေး နဲ့ ကိုယျ့ယုံကွညျမှုကို ထပျ မယိမျးယိုငျပါစနေဲ့ ။
( ၃ ) သငျ့ ဦးနှောကျ ကောငျးကောငျးဖှံ့ဖွိုးဖို့ အိပျခြိနျမှနျမှနျအိပျပါ ။
နစေ့ဉျ(၆)နာရီ မှ (၈)နာရီကွား အိပျတဲ့သူတှကေ ဘဝမှာ တိုးတကျပြျောရှငျမှုတှေ ကို သိမျးပိုကျနိုငျကွပါတယျလို့ စဈတမျးတှအေရ သိရပါတယျ ။ အဲ့တာကွောငျ့ သငျ့အနနေဲ့ အိပျခြိနျမှနျမှနျ အိပျဖို့ လိုပါတယျ ။ အိပျခြိနျမှနျတာက ရုပျပိုငျးဆိုငျရာတိုးတကျမှုကို အထောကျအပံ့ကောငျးပေးတာကွောငျ့ စိတျစှမျးရညျ တိုးတကျဖို့ကိုလညျး တဈဖကျက အကြိုးပွုနတောဖွဈပါတယျ ။
( ၄ ) တဈပတျမှာတဈကွိမျ အနညျးဆုံးတရားထိုငျပါ ။
Stress တှေ ပိလာတဲ့ အခါ အရေးကွီးဆုံးက စိတျထားတတျဖို့ပါ ။ စိတျထားတတျဖို့ က စိတျငွိမျဖို့ အရေးကွီးပါတယျ ။ အဲ့အတှကျ တရားထိုငျရပါမယျ ။ တရားထိုငျခွငျး က သငျ့စိတျစှမျးရညျမွငျ့ဖို့အတှကျ အကောငျးဆုံးနညျးလမျး ဖွဈပါတယျ ။ အဲ့တာကွောငျ့ တဈပတျတဈခါ တရားထိုငျဖို့ လိုကို လိုအပျပါတယျ ။
( ၅ ) လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျဖို့ သတိရပါ ။
လူအမြားစုဟာ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျဖို့ ကို မနေ့တေတျကွပါတယျ ။ နစေ့ဉျလှုပျရှားမှုတှကေို လကေ့ငျြ့ခနျးလို့သတျမှတျတတျကွပါတယျ ။ နစေ့ဉျလှုပျရှားမှုတှကေလညျး လကေ့ငျြ့ခနျး လို့ သတျမှတျလို့ရပမေဲ့ Focus မတူတဲ့အတှကျ မထိရောကျပါဘူး ။ အဲ့တာကွောငျ့ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျခြိနျဆိုပွီး သတျသတျမှတျမှတျ ထားဖို့လိုပါတယျ ။ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတာ က တဈပွိုငျနကျတညျးမှာ ကိုယျခန်ဓာနဲ့ ဦးနှောကျကို အလုပျပေးတာဖွဈတဲ့အတှကျ စိတျစှမျးအငျမွငျ့မားစတေဲ့ အလအေ့ကငျြ့ကောငျးတဈခုဖွဈပါတယျ ။
( ၆ ) အဓိက နဲ့ သာမည ခှဲခွားတတျပါစေ ။
ခုလကျရှိ သငျ့အတှကျ ဘာကအရေးကွီးနလေဲဆိုတာကို သိရပါမယျ ။ အရေးကွီးတဲ့အရာကို အာရုံစိုကျဖို့အတှကျ အသေးအမှားလေးတှကေို နောကျဆုတျထားရပါတယျ ။ အဲ့တာမှသာ လုပျဆောငျရမယျ့ အလုပျတှကေ စနဈတကြ ပွီးမွောကျနမှောဖွဈပါတယျ ။
ဥပမာ - စာမေးပှဲမနကျဖွနျရှိတယျ ။ ဒီနေ့ ဂိမျးဆော့နတေယျ ။ ဒါဆို သငျက အဓိက နဲ့ သာမည မခှဲခွားတတျတဲ့သူပါ။ ကဲ ဒါဆို စိတျစှမျးအငျမွငျ့မားဖို့ ဘယျအခကျြလေးတှေ ကို သတိပွုဆောငျထားရမလဲ သိကွလောကျပွီထငျပါတယျ ။
www.sayar.com.mm ရဲ့ စာဖတျပရိသတျအားလုံးလညျး စိတျစှမျးအငျမွငျ့မားသူမြားဖွဈကွပွီး အောငျမွငျအပေါငျး ရယူနိုငျပါစေ . . .
အပြိုင်အဆိုင်တွေများလွန်းတဲ့ခေတ်မှာ စိတ်စွမ်းအင်မြင့်စေဖို့ အလေ့အကျင့်ကောင်း ( ၆ ) ချက်
နည်းပညာခေတ်ရောက်လာတာနဲ့အမျှ အခွင့်အရေးတွေ အခွင့်အလမ်းတွေ များလာသလောက် အပြိုင်အဆိုင်တွေလည်း အင်မတန်ပေါများလာပါတယ် ။
သင့်အနေနဲ့ ဒီ ခေတ်ရေစီးကြောင်းနဲ့ အပြိုင် မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင် သေချာပေါက် သင်နောက်ကျကျန်ခဲ့မှာပါ ။ ခတ်ရေစီးကြောင်းနဲ့ အပြိုင် လိုက်နိုင်ရင်တော့ မတူညီတဲ့ ပြိုင်ဘက်မျိုးစုံနဲ့ တွေ့ကြုံရမှာပါ ။
ဒီတော့ နောက်ကျကျန်ခံမလား? ကြုံလာတဲ့အရာတွေကို ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်မလား?ဆိုတာ သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ပါ။ သင့်အနေနဲ့ ဒီ အပြိုင်အဆိုင်တွေကြားထဲမှာ ခေါင်းမော့ရင်ကော့ပြီး နေဖို့ အတွက် စိတ်စွမ်းအင်မြင့်မားနေဖို့ လိုပါတယ် ။
ဒါကြောင့် စိတ်စွမ်းအင်မြင့်မားစေဖို့ အလေ့အကျင့်ကောင်း ( ၆ ) ချက်ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် ။
( ၁ ) Stress တွေကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ်မလဲ သင်ယူပါ ။
ပထမဆုံး ကတော့ သင့်ရဲ့ Stress Level ကို ကိုင်တွယ်နိုင်ရမယ် ။ Stress တွေ များလာလေ ခန္ဓာကိုယ် ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချင်တွေက မြန်လာလေ ဖြစ်တာကြောင့် စွမ်းအင်တွ အလဟဿကုန်ခမ်းရပါတယ် ။ အဲတာကြောင့် သုတေသီ တွေက Stress တွေ ပိလာတဲ့အခါ သက်ပြင်းမချမိအောင် သတိထားနေပါတဲ့။ ဒါက စိတ်စွမ်းအင်မြှင့်တင်ဖို့ရန် အရေးကြီးတဲ့ ပထမဆုံး အချက်တစ်ချက် ဖြစ်ပါတယ် ။ မိမိရဲ့ အတွေးထဲကို ဘယ်ဖိအား မှ ဝင်မလာနိုင်စေဖို့ သက်ပြင်းမချရတာပါ ။
( ၂ ) မိမိကိုယ်မိမိ ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါ ။
မိမိကိုယ်မိမိ ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ ဆိုရင် အရင်ဆုံး မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိအောင်ကြိုးစားဖို့ အရေးကြီးပါတယ် ။ သင့်ကိုယ်သင် ယုံကြည်မှုရှိနေဖို့ အတွက်ကတော့ ကိုယ်တာဝန်ယူထားတဲ့ တာဝန်ဝတ္တရားအကုန်ပြီးမြောက်နေရပါမယ် ။ အဲ့တာကြောင့် အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ သင့်စွမ်းရည်တွေကို မကန့်သတ်ထားသင့်ပါဘူး ။
ကိုယ်မလုပ်ရဲတဲ့၊ ကိုယ်မကျွမ်းကျင်တဲ့ အလုပ်တစ်ခု လုပ်ရတော့မဲ့ အခါ “ ငါမလုပ်နိုင်ဘူး “ လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်မှတ်လိုက်တာထက် “ ငါမလုပ်ဘူး “ လို့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ငြင်းနိုင်ရပါမယ်လို့ ပညာရှင်အချို့ က ဆိုပါတယ် ။ ကိုယ်မလုပ်ရဲတဲ့အရာဆိုတည်းက အဲ့မှာ သင့်စိတ် တစ်ခေါက် သိမ်ငယ်နေရပါပြီ ။ “ ငါမလုပ်နိုင်ဘူး “ ဆိုတဲ့အတွေး နဲ့ ကိုယ့်ယုံကြည်မှုကို ထပ် မယိမ်းယိုင်ပါစေနဲ့ ။
( ၃ ) သင့် ဦးနှောက် ကောင်းကောင်းဖွံ့ဖြိုးဖို့ အိပ်ချိန်မှန်မှန်အိပ်ပါ ။
နေ့စဉ်(၆)နာရီ မှ (၈)နာရီကြား အိပ်တဲ့သူတွေက ဘဝမှာ တိုးတက်ပျော်ရွှင်မှုတွေ ကို သိမ်းပိုက်နိုင်ကြပါတယ်လို့ စစ်တမ်းတွေအရ သိရပါတယ် ။ အဲ့တာကြောင့် သင့်အနေနဲ့ အိပ်ချိန်မှန်မှန် အိပ်ဖို့ လိုပါတယ် ။ အိပ်ချိန်မှန်တာက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ကောင်းပေးတာကြောင့် စိတ်စွမ်းရည် တိုးတက်ဖို့ကိုလည်း တစ်ဖက်က အကျိုးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ် ။
( ၄ ) တစ်ပတ်မှာတစ်ကြိမ် အနည်းဆုံးတရားထိုင်ပါ ။
Stress တွေ ပိလာတဲ့ အခါ အရေးကြီးဆုံးက စိတ်ထားတတ်ဖို့ပါ ။ စိတ်ထားတတ်ဖို့ က စိတ်ငြိမ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ် ။ အဲ့အတွက် တရားထိုင်ရပါမယ် ။ တရားထိုင်ခြင်း က သင့်စိတ်စွမ်းရည်မြင့်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း ဖြစ်ပါတယ် ။ အဲ့တာကြောင့် တစ်ပတ်တစ်ခါ တရားထိုင်ဖို့ လိုကို လိုအပ်ပါတယ် ။
( ၅ ) လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ သတိရပါ ။
လူအများစုဟာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ ကို မေ့နေတတ်ကြပါတယ် ။ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေကို လေ့ကျင့်ခန်းလို့သတ်မှတ်တတ်ကြပါတယ် ။ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေကလည်း လေ့ကျင့်ခန်း လို့ သတ်မှတ်လို့ရပေမဲ့ Focus မတူတဲ့အတွက် မထိရောက်ပါဘူး ။ အဲ့တာကြောင့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ချိန်ဆိုပြီး သတ်သတ်မှတ်မှတ် ထားဖို့လိုပါတယ် ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ က တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာ ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ ဦးနှောက်ကို အလုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်စွမ်းအင်မြင့်မားစေတဲ့ အလေ့အကျင့်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။
( ၆ ) အဓိက နဲ့ သာမည ခွဲခြားတတ်ပါစေ ။
ခုလက်ရှိ သင့်အတွက် ဘာကအရေးကြီးနေလဲဆိုတာကို သိရပါမယ် ။ အရေးကြီးတဲ့အရာကို အာရုံစိုက်ဖို့အတွက် အသေးအမွှားလေးတွေကို နောက်ဆုတ်ထားရပါတယ် ။ အဲ့တာမှသာ လုပ်ဆောင်ရမယ့် အလုပ်တွေက စနစ်တကျ ပြီးမြောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ် ။
ဥပမာ - စာမေးပွဲမနက်ဖြန်ရှိတယ် ။ ဒီနေ့ ဂိမ်းဆော့နေတယ် ။ ဒါဆို သင်က အဓိက နဲ့ သာမည မခွဲခြားတတ်တဲ့သူပါ ။ ကဲ ဒါဆို စိတ်စွမ်းအင်မြင့်မားဖို့ ဘယ်အချက်လေးတွေ ကို သတိပြုဆောင်ထားရမလဲ သိကြလောက်ပြီထင်ပါတယ် ။
www.sayar.com.mm ရဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်အားလုံးလည်း စိတ်စွမ်းအင်မြင့်မားသူများဖြစ်ကြပြီး အောင်မြင်အပေါင်း ရယူနိုင်ပါစေ . . .